people Nepal » नेपालमा यसरी विस्तार भएको थियो क्यासिनो ! नेपालमा यसरी विस्तार भएको थियो क्यासिनो ! – people Nepal
नेपालमा यसरी विस्तार भएको थियो क्यासिनो !
क्यासिनो सञ्चालनको निवेदन दिन पाँचलाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नपर्ने प्रावधान राखियो । ‘तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले नियमावली क्यासिनो बन्द गर्नै ल्याइएको हो भनेका थिए’, सिलवाल सुनाउँछन् ।नियमावलीविरुद्ध क्यासिनो सञ्चालकको संस्था क्यासिनो एसोसिएसनले न्यायालय गुहार्‍यो ।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेन । यसपछि क्यासिनो बन्द भए । अहिले र्‍याडिसन, हायात, सोल्टी र याक एन्ड यतीका क्यासिनो सञ्चालनमा छन् । सांग्रिला, हायात सोल्टीमा विदेशी व्यवस्थापन छ । र्‍याडिसन र रोयलले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर चलाइरहेका छन् ।
क्यासिनो पर्यटक भित्र्याउने उत्पादन हुनुका साथै लामो इतिहास भएकाले यसलाई जोगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । लास भेगास क्यासिनो टुरिस्टका लागि विश्वकै १ नम्बर गन्तव्य मानिन्थ्यो । त्यहाँ एक सयभन्दा बढी क्यासिनो छन् । मकाओले क्यासिनो पर्यटनलाई प्राथमिकतामा दिएर १८ वटा क्यासिनो खुल्दा लास भेगास पछि पर्‍यो ।सिंगापुरमा त दुईवटा क्यासिनोले लास भेगासलाई उछिन्दिए ।
नेपाल पनि क्यासिनो पर्यटनका लागि उपयुक्त छ । यसको इतिहास लामो छ नै, जुवा खेल्न सोखिन मानिने चिनिया“ र भारतीय हुन, छिमेकमा छन् । भारतीय जुवा खेल्न मकाओ, सिंगापुरका साथै कम्बोडिया, भियतनामसम्म पुग्छन् । तिनलाई यहा“ आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
दिल्लीका अवैध क्यासिनोमा नेपाली कामदार भरिएका छन् । लामो इतिहास र एकचोटी फले/फुलेको व्यवसाय भएका कारण नेपाली जनशक्ति बिक्ने अवस्था भयो ।